I-Blogger i-Haven ye-Black Hat SEO | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 11, 2009 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2015 Douglas Karr
Umngani omuhle nomeluleki, uRon Brumbarger ungishiyele inothi namhlanje ekuseni ngesixhumanisi esiphazamisayo esiya kubhulogi eku-Blogger evele kwezinye Izaziso zeGoogle ngamanye amagama angukhiye ayewalandela. Ngeke ngiphinde amagama angukhiye lapha, ngoba angifuni ukuthi izivakashi zami zixhumane noma zivakashele ibhulogi, kepha okutholakele bekuphazamisa impela. Nasi isigaba sombhalo esivela kubhulogi engithole ukuthi sixhunywe ku:
I-URL negama lebhulogi kubonakala sengathi kufakwe ikhodi ngendlela ethile ukuze umdali akwazi ukulandelela imiphumela. Okufakiwe kokuthunyelwe okuqukethwe okuvela eceleni okufafazwe ngamagama asemqoka agqamile - kubonakala kuvivinya ukuqina kwamagama asemqoka. Futhi, kukhona ama-backlinks kwamanye amabhulogi ahlola amanye amagama angukhiye… umzila uyaqhubeka uqhubeke njalo.
Ibhulogi okukhulunywa ngayo ayibonakali ukuthi yeba noma yikuphi okuqukethwe, kumane nje kuphazamise ekuhlolweni kwamanye amagama asemqoka okusesha nemisho. Isizathu esisodwa esenza lokhu kusabise ukuthi mhlawumbe bayahlola ukuze bakwazi ukubala ukuthi bangawathola kanjani lawo magama ezinjini zokusesha. Ngazisa uRon futhi ngamthumelela isixhumanisi Ifomu lokubika le-Blogger Spam Blog; ngethemba ukuthi izovalwa ngokushesha kanye nawo wonke amanye amabhulogi ahlobene axhuma abuye avele kubo.
Angimangali ukuthi kunogaxekile laphaya abahlola ngalezi zindlela. Kuyangimangaza nokho ukuthi lokhu kwenzeka ngaphansi kwekhala leGoogle! UMat Cutts ucela imibono ethile ngalokho iGoogle okufanele ikwenze webspam ngo-2009 - mhlawumbe ipulatifomu yabo kufanele ibe yinto ephambili kakhulu!
Ngiyabonga ngokungazisa futhi ngibhale ngale Ron! URon ungumongameli weBitwise Solutions, inkampani eNdunankulu lapha e-Indianapolis eyenza umsebenzi omangazayo ezweni lonke Ukuthuthukiswa nokuhlanganiswa kweMicrosoft Sharepoint.
Tags: isikhwama esimnyamaisigqoko esimnyama seomnyamai-blackhat seoBloggerGoogle +ukusika kwe-mattI-Microsoft SharepointI-ron brumbarger
Jan 13, 2009 ku-2: 32 AM
Uma ngabe unikeze i-Google database amandla okukhuluma futhi wathi "ngitshele ngezindiza eziya eChicago" lokho cishe kusondele kakhulu kulokho engakusho. Ngaphandle kokuthi umuntu abheke ngaphezu kwehlombe lakhe i-database empeleni ayinalwazi.
Kungathola isisindo segama elingukhiye kahle. Kungathola inani lezenzi / amabizo / amagama amiswe kahle. Kungathola ezinye izinto eziningana eziyinkimbinkimbi ngokulungile kepha bekungasoze kube nengqondo ngaphandle kokuthi bekuphindaphinda izwi nezwi.
Nami angimangali ukubona lokhu, kubukeka sengathi u-2010 kungenzeka kube amaqhinga wonyaka ononya athatha indawo lapho abagaxekile behlasela nje ngobuningi imiphumela yosesho ngevolumu eyedlulele ngenkathi iGoogle iba yindlala ekudingeni inhlanganisela ephelele yamagama ngaphambi kokunikela ngemiphumela yekhasi elilodwa .
Ngingathanda ukuzwa okuningi kokutholakele kwakho uDoug uma kukhona okunye okwenzekayo ngalokhu.
Abalimi baseGeorge dw
Aug 5, 2009 ku-4: 45 AM
Amazwana amabili okugcina awabukeki njengogaxekile yini ???
Blah Ngiyayithanda ibhulogi yakho, ngizobuya ngiyoyihlola njll ...,
manje bane-PR3 Backlink hmmmm…
Ngeke ngithumele isixhumanisi lol ngokwami ​​🙂
Aug 5, 2009 ngo-12: 46 PM
Angibeki isisindo esiningi ku-Pagerank - nginaka kakhulu ukubeka kahle amagama angukhiye adonsa ithrafikhi eningi. Le bhulogi ifinyelela kahle kumakhulu amagama angukhiye. Ngabe ngifisa ukuthi ngibe ne-PR9? Impela! Angikutholi ukunquma lokho, noma kunjalo. Nginama-TONS ama-backlinks nomlando omuhle - anginasiqiniseko sokuthi kungani i-PR yami iphansi.
Ngiyabonga RE: Ugaxekile. Ngiku-IntenseDebate manje futhi ngizama ukuthola ukuthi ngingawathola kanjani lawa mazwana amadala ukuwamaka njengogaxekile!
Aug 5, 2009 ngo-12: 47 PM
Ngiyabonga RE: Ugaxekile. Ngiku-IntenseDebate manje - anginasiqiniseko sokuthi bakwenze kanjani okwedlule. Bahambile manje!